कोरोना ग्राफ उकालो लाग्दै — Raranews.com
रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१२/१९ गते
काठमाडौं । आमनागरिकको हेलचेक्रयाइ र सरकारको पूर्वतयारी फितलो हुँदै जा“दा ‘कोरोना ग्राफ’ उकालो लाग्दै गरेको पाइएको छ । मुख्यतः जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा र सरकारबाट रोकथाम तयारी फितलो हुँदा संक्रमित संख्या बढ्दै गएको हो ।
अधिकांश नागरिकले मास्क समुचित प्रयोग गर्न छाडेको र भौतिक दूरी कायम गरिरहेका छैनन् । सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, फिल्म हललगायत भीडभाड हुने स्थानमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, सीमानाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड फितलो देखिएको छ । सरकारले सीमानाकामा हेल्थ डेस्क सक्रिय बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सामुदायिक तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रम विभागका निर्देशक डा. विराज कर्माचार्यले नेपालमा कोरोना संक्रमण विस्तारै बढ्न थालेको बताए ।
‘दोस्रो चरणको संक्रमण बढ्ने सम्भावना छ, व्यक्तिगत रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अबलम्बन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोभिड शंका लागे परीक्षण गराउनुपर्छ, सधैं मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विज्ञ डा. रोशन पोखरेलले भारतबाट आउनेलाई जाँच गरेर मात्रै प्रवेश दिइने बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले संक्रमण रोकथामका लागि स्वयं व्यक्ति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नुपर्छ, हातले मुख, नाक छुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणको सम्भावित संक्रबाट रोक्न स्वास्थ्य सेवा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने देखिएको छ ।’
नेपालमा यो सातालाई आधार मान्दा ३८ प्रतिशतले कोरोना संक्रमण वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार देशभर थप १ सय ६२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योस“गै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या २ लाख ७७ हजार ३ सय ९ पुगेको छ ।
संसदीय दलको बैठकबाट निस्केर देउवाले भने-ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताबारे टुंगो लागिसकेको छैन
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्‍ बैठक